Weli Socda: Isbedelka Joogitaanka Koonfurta iyo Koonfurta Minnesota
Hoos waxaa ka mid ah warbixinta McKnight ee loo xilsaaray warbixinta "Weli Socda: Aragtida isbedelka ee Koofurta iyo Koonfurta Minnesota," ayuu qoray Jay Walljasper. Warbixintu waxay sahminaysaa fursadaha iyo caqabadaha ku yaalla Albert Lea, Morris, iyo bulshooyinka kale ee yaryar ee qaybta koonfureed ee Minnesota.
Xarunta daweynta ee gobolka Willmar ayaa la xiray in ka badan tobaneeyo sano ka hor, lakiin dhimashadii geeriyootay ayaanu fileynay markii bulsho yaraa ay lumiso shaqeeye weyn oo aan waligeed maqlin. Hase yeeshee, Willmar ayaa dib u furtay mid ka mid ah hantidii ugu wanaagsanayd ee bulshada, isaga oo beddelay cusbitaalka taariikhiga ah ee lakeshore ee cusbataallada taariikhiga ah ee 1912-kii oo ku yaala in ka badan 30 shirkadood oo shaqaaleysiinaya ku dhawaad 570 shaqaale - ku dhowaad inta badan ee isbitaalku ku jiray maalintiisa. Xaqiiq ahaan, sida Jay Walljasper ka soo baxday booqashadii ugu dambaysay, wuxuu leeyahay Willmar wax wada-shaqeyneed oo soo bandhigaya tayada qiimaha hoose ee nolosha iyo kalsooni-isku-qabashada kuwaas oo gacan ka geysanaya in la soo saaro tirade sii kordhaysa ee Millennium iyo Gen Xers dib loogu celiyo magaalooyinka yaryar ee Minnesota.
Guusha MinnWest Technology Campus waa mid ka mid ah calaamado badan oo ka mid ah xasiloonida miyiga ah ee koonfurta dhexe iyo koonfur galbeed ee Minnesota oo ka muuqda taxanaha sanadlaha ah ee Cunnada Maskaxda ee ay maamusho Hay'adda McKnight Foundation. Qodobkaan afaraad iyo kan ugu dambeeya, Walljasper, oo ah awooda qorshaynta magaalooyinka iyo horumarinta bulshada, ayaa booqda Milan, halkaas oo dad aad u badan oo hodanka micronesian ah ku haya magaalada ku hareeraysan magaalada yar ee 370 degaanka, iyo naqshad nadiifin tamarta nadiif ah ayaa gacan ka gaysan karta beeralayda maxalliga ah xilliga sii kordhaya. Jaaliyada Siouxx ee hoose, wuxuu ogaaday in dib u soo nooleynta luuqad asaliga ah iyo ciyaarta lakorse ay gacan ka geysatey in ay siiso dhalinyaro qabaa'il oo qoto dheer oo gobolka ka mid ah. In Luverne, wuxuu la kulmaa hoggaamiyeyaasha ganacsiga maxaliga ah oo soo celiyay Tiyaatarka Qaranka Tiyaatarka magaalada, isagoo caddeeyay qiimaha iskaashiga dowlaha-gaarka ah. Albert Lea - mid ka mid ah beelaha buluugga ah ee Blue Zone ayaa dib u habeyn ku sameeyay ololaha dheeraadka ah ee loo yaqaan 'Minnesotan Dan Buettner' - wuxuu ka helaa xalal dheeri ah iyo hagaajin kale oo lugo leh oo aan ahayn kaliya dadka degaanka ka caawiyay inay ka baxaan lacagaha dheeraadka ah, laakiin waxay sidoo kale qiimeeyaan hantida hantida magaalada 25 boqolkiiba.
Deganayaasha Albert Lea, Minnesota.
Inkasta oo ay jiraan caqabado badan oo ka jira magaalooyinka yaryar ee Minnesota, taxanaha Cuntada ee Mawduuca wuxuu inoo xusuusinayaa in si ka baxsan dhulka metro ay tahay aalado firfircooni ah oo wadajir ah oo wadajir ah ay dad badani ka dhigi karaan isbeddel xoogan oo ku yimaada Main Street. Maadaama hal qof degen yahay oo ku saabsan ganacsiyada ganacsiga, badankooda haweenku leeyihiin, noloshooda cusub u keenaan New London, "Saddex qof ayaa ku kulmaya casho, waxyaabuhuna bilaabmayaan."
Taasi waa nooca firfircoon ee bulshada Beesha McKnight Foundation waxay ku faraxday inay taageerto iyada oo loo marayo hawsha Minnesota Founditative Foundations, lix hay'ado oo kala duwan oo loogu talagalay in lagu muujiyo qiimaha iyo aragtida beelaha kala duwan ee ay u adeegaan. Dhibaatada ka dhalatay dhibaatada beeraha 30 sano ka hor, "MIF qaab" ayaa tan iyo markii loo oggolaaday Foundation in uu maalgaliyo in ka badan $ 290 milyan oo ka mid ah bulshooyinka miyiga ah ee gobolka, ballan qaad joogto ah oo gacan ka gaystay kordhinta $ 270 milyan dheeraad ah si loo kobciyo fikradaha wanaagsan iyo dadaalka aasaasiga ah ee ku yaalla Woqooyiga Minnesota.
Waxaan rajeyneynaa in xarigahan koonfurta dhexe iyo koonfur galbeed ee Minnesota ay bilaabi karaan in ay ka saaraan khuraafaadka in magaalooyinkeena yaraa ay dhimanayaan. Warbixinta Walljasper ayaa caddaynaysa, soogalootiga cusub, fikradaha cusub, iyo qaababka cusub ee ganacsiga ayaa ka caawiya bulshooyinka badan ee miyiga ah "inay yareeyaan sheekada miyiga" mustaqbal wanaagsan.